Ọpụpụ nke ịpụ iche apụtaghị naanị n'oge ọkọchị | Netwọk Mgbasa Ozi
N'oge okpomọkụ ọpụpụ glacial bụ ihe nkịtị. Okpomoku di okpomoku na-eme ka ice gbazee ngwa ngwa. Ma n’oge oyi, oké osimiri nke okporo osisi na-ajụ oyi ọzọ, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ nke ahụ bụ ihe ọ mere ruo mgbe ụmụ mmadụ nwere mmetụta dị ukwuu otú ahụ na gburugburu ebe obibi.
Otu ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị nke Spen achọpụtala na ọpụpụ mmiri ahụ sitere n'osisi abụọ ahụ agbatịwo n'oge oge ọkọchị. Afọ iri gara aga, edere ụkpụrụ ụkpụrụ ịhapụ kacha dị na ọnwa July na August. Ugbu a na-agba ọsọ site na June rue Ọktọba.
Ihe ọhụrụ ndị ọkachamara a nwere na ọrụ ahụ Glakma (GLAciares, CrioKarts na Gburugburu) yiri ka ọ na-egosi nke ahụ omume ahụ nwere ike ịga n'ihu ịgbasa ọbụna n'ihu: Ikpeazụ May ụkpụrụ ndị e debanyere aha bụ mmalite nke mmalite nke oge okpomọkụ. A na-eme data data ndị a na-agba agba na Northern Hemisphere na glaciers na Arctic Sweden, Vatnajökull ice cap (Iceland), glaciers na Svalbard (Norway) na ugwu Urals (Russia).
N'aka nke ọzọ, na Southern Hemisphere, a na-eme nha na glaciers atọ dị na Antarctica, Argentine Patagonia na Chile Patagonia. Yabụ, na ha nwere ike ịnwe netwọkụ igwe na-achọpụta glacier n'akụkụ abụọ ahụ, nke na-enye ohere inwe njikwa ntụnyere nke ihapu glaciers dịka mgbanwe nke ihu igwe. Ihu igwe na-adịwanye ọkụ ma na-ekpo ọkụ n'ọtụtụ akụkụ ụwa, nke mere na site na nzube ọgbụgba mmiri, ebili mmiri na-arị elu.
Enweela mbido ọkwa mmiri. Okpomoku di n’uwa n’iru. Dị ka GLACKMA si kọọ, Enwere ike iji nke ọ bụla n'ime mgbanwe abụọ dị n'etiti iji tụọ mgbanwe nke ịrị elu na okpomọkụ, nke bụ ọnọdụ ikuku dị na mmiri na mmiri mmiri glacial. Nke ikpeazu bu ihe na-agbanwe agbanwe nke uku, ya mere enweta net kacha na ihe kacha nta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ọpụpụ nke ịpụ iche anaghị adị naanị n'oge ọkọchị